အမှတ်မထင် လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နှလုံးသားအပိုင်းအစများ စုစည်းရာ: April 2008
ဘလောစ့်ကိုလာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ခရီးဝေးတစ်ခုကို ထွက်ရမှာမို့ ဘလောစ့်ကိုလာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ စီဘောက်မှ စာများကိုပြန်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါ။
နှစ်လလောက် ဘလောစ့်ကို ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ဘလောစ့်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းများကို အမြဲအောက်မေ့သတိရနေမှာပါ။ကျွန်တော်မရှိပေမယ့် ကျွန်တော် ဘလောစ့်လေးကိုဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။ဘလောစ့်လေးပျောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ စောင့်ရှောက်မဲ့သူကိုလစာအဖြစ် ဆီနှစ်ဇွန်း၊ဆန်တစ်ဗူး၊ဂျီအီးစီ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်အပြင် ၊တစ်ခါပဲဝတ်ထားပြီးမလျော်ရသေးတဲ့ စွတ်ကျယ်တစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးပါ့မယ်။အမြန်ဆုံးလျောက်လွှာတင်နိုင်ပါပြီ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်စဉ်းစားပါ့မယ်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:53 PM 1 comment:
ကျွန်တော် နဲ့ ဖိုးကြယ် ၊ မြစ်ကောက် ၊သုံး ယောက်ဟာ တစ်ခန်းတည်းအတူနေကြတဲ့ ၀ါသနာတူ စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်းတွေပေါ့။
ပြောမနာဆိုမနာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လှည့်ပတ်ပြီး နောက်တတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ဟာ အလုပ်ချိန်တွေမတူကြပေမယ့် ညကြရင်တော့ သုံးယောက်အမြဲဆုံတတ်ကြပါတယ်။သုံးယောက်ဆုံတာနဲ့ ကော်ဖီသုံးခွက်ဖျော် ရေနွေးအိုးတစ်အိုးနဲ့ ဆေးလိပ်တစ်ဗူး ဘေးမှာချကာ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးစတင်ပါတော့တယ်။အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးဆိုတာကလည်း အပျော်တမ်းဖဲရိုက်ကြတာပါ။အပျင်းပြေ ပိုကာဆွဲတမ်းကစားကြပါတော့တယ် ပိုကာဆွဲတမ်းကစားရင် ကိုဖိုးကြယ်အလှည့်ရောက်ရင် သူပစ်မယ့် ပစ်ဖဲစောင့်ရတာ အရမ်းကြာတတ်ပါတယ်
စောင့်ရလွန်းလို့ အိပ်ငိုက်လာပါတယ် ။တစ်ကယ်ကို ဘူတာကြီးပါ ဘယ်ဘူတာလည်းတော့မသိဘူး ။ဘူတာကြီးမှာ ၀စ်စနှစ်လုံးပေါက်မပါဘူးနော် မှားဖတ်မိမှာစိုးလို့သတိပေးရတာပါ။ကိုဖိုးကြယ်ကိုလည်းသွားမပြောကြပါနဲ့အုံးနော်။
သူကိုစောင့်ရတာကြာလာတာနဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ဘောပင်ယူ ကဗျာရေးတမ်းကစားကြပါတော့တယ်။ကဗျာတစ်ကြောင်းကို ကိုဖိုးကြယ်ပစ်ဖဲမကျခင် တစ်ယောက်ကအရင်စရေး ပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကဆက်ရေး ရပါတယ် ။စရေးတဲ့သူကလည်း ကိုယ်စရေးတဲ့အစဟာ နောက်ရေးမယ့်လူ အခက်တွေ့အောင်လုပ်၊ချောက်ချ၊ကျပ်တာကအစ နောက်ရေးမယ်သူ ခက်ခဲအောင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရေးမယ်သူကလည်း အချိန်အကြာကြီးစဉ်းစားချိန်မရပါဘူး နောက်တစ်ယောက်ပစ်ဖဲမကျခင်ပဲစဉ်းစားချိန်ရပါတယ် အများဆုံးတစ်မိနစ်ပေါ့။တစ်ကယ်တော့လက်တမ်းရေးရတာပါ။
အဲ့လို....အဲ့လိုနဲ့ ဖဲရိုက်ရင်း ကဗျာရေးတမ်းကစားရင်နဲ့ ကဗျာလေးတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။စိတ်ပါရင်လည်း ကျွန်တော်တို့လို လိုက်ကစားကြပေါ့ (ကဗျာရေးတမ်းပြောတာနော်)။ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေဝါသနာတူတွေ လိုက်ရှာပြီးကစားကြပေါ့ အပျင်းလည်းပြေတယ် ကဗျာလေးတွေလည်းရတယ်။ကြိုပြောထားမယ် ကျွန်တော်ကတော့ မအားလို့ လာမခေါ်ပါနဲ့နော် တစ်ကယ်ကိုမအားတာပါဗျာ အိပ်လိုက်စားလိုက်လုပ်နေလို့။ကျွန်တော် တို့ကစားထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်တယ် လိုအပ်တာရှိရင်လည်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်၊ပြောနိုင်ပါတယ်။
အဲ့လိုထင်ရင် မှားတော့မှာပေါ့ (ဖိုးကြယ်)
တစ်ခါတစ်လေ ဘ၀တစ်ကွေ့မှာ (ရင်ခတ်နွယ်)
"မမြမေ" လည်း ပဲပြုတ်ရောင်းတယ်(မြစ်ကောက်)
ဖိုးကြယ်လည်း ဆိုက္ကားနင်းတာဘဲ (ဖိုးကြယ်)
ဘ၀အတွက် အမှတ်တရပေါ့ (ရင်ခတ်နွယ်)
မှားတော့မှားမယ် မထင်မိပါဘူး (မြစ်ကောက်)
ထွက်ပေါက်တွေ ဘယ်မှာလည်း ........။ (ဖိုးကြယ်)
ပြုတ်ကျလည်း အကျနာစရာလား? (မြစ်ကောက်)
ရင်နာစရာဆိုလည်း ခါးစီးခံမှာပဲ (ဖိုးကြယ်)
လိပ်တစ်ကောင်လို အခွံထဲဝင်နေစရာမှမလိုတာ (ရင်ခတ်နွယ်)
ပိုတာက ရာဖြတ်စား (မြစ်ကောက်)
လျှံထွက်နေတာကို ကော်ပတ်စားပစ်မယ် (ဖိုးကြယ်)
အရောင်တွေက စကားပြောတတ်ရင်ပေါ့ (ရင်ခတ်နွယ်)
ညကမှောင်ဆဲ လကသာဆဲ (ဖိုးကြယ်)
အတိတ်က အနိစ္စပမာ (မြစ်ကောက်)
အချစ်မပါတဲ့ဘ၀ ဖြေသိမ့်ကာမရတော့ (ဖိုးကြယ်)
အတ္တပုံဆောင်ခဲကိုပဲ ပ၀ါပါးအုပ်လိုက်တယ်.....။ ။(ရင်ခတ်နွယ်)
ပျိုပျိုမေလာရာလမ်း မှန်းကာလွမ်းတော့ (ရင်ခတ်နွယ်)
တစ်ခါတစ်လေ ခွေးချေးတောင် တက်နင်းမိတယ်(ဖိုးကြယ်)
ကိုယ့်ဘေး ကိုယ်ကြည့် မောင်ဖိုးကြယ် ... (မြစ်ကောက်)
ဆရာ့ဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးဘဲဆိုကြပါစို့ (ဖိုးကြယ်)
ဗိုလ်ကျဖို့ သေနတ်လိုတယ်ကွ ... (မြစ်ကောက်)
လက်ညှိးကွေးတတ်ရုံလေးနဲ့ ခွေးချေးမနင်းသင့်ဘူး (ရင်ခတ်နွယ်)
ရေတစ်ဗူးရှိရုံနဲ့အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံမှာပါ(ဖိုးကြယ်)
နှီးယှက်နွယ်တဲ့ ထရံဝါ (မြစ်ကောက်)
ထီးဖြူကာ ဖိနပ်ပါးလိမ့်မှာပေါ့ (ရင်ခတ်နွယ်)
ဆိုးချက်က လက်ကုန် (မြစ်ကောက်)
သိရက်နဲ့ လက်ကုန်မိုက်တော့ (ရင်ခတ်နွယ်)
ကြားကဆွဲလို့ ကျန်တဲ့မောင်ရယ် (မြစ်ကောက်)
သေစရာလား ? အသဲကွဲ ဘလောဂ့်ဂါ (မြစ်ကောက်)
ခန်းတဲ့ညနေ ဂျမ်းဂဲလ်တွေနဲ့ (မြစ်ကောက်)
ပုဆိုးကိုဆွဲ လမ်းမှာလဲတော့ (ရင်ခတ်နွယ်)
ဥသြဆွဲတဲ့ ညတွေကိုလည်း လွမ်းတယ်(ဖိုးကြယ်)
မစမ်းရယ် ... လ္ဘက်သုတ်လေးပေး (မြစ်ကောက်)
သွေးကစကားပြောလာတော့ သဘာဝလို့ တောင်ပြောလို့ ရတယ်(ဖိုးကြယ်)
ပူစရာလား ? မင်းတို့ ... ငါတို့ ... (မြစ်ကောက်)
ပျက်တာလည်း နင့်ကြောင့် ... ကဗျာ (မြစ်ကောက်)
သိပ်မိုက်တဲ့မင်း လူပျင်း! (မြစ်ကောက်)
သိပ်မပျင်းနဲ့ ဖျင်းလိမ့်မယ် ငါ့တူသားရယ်(ရင်ခတ်နွယ်)
ဖွဲ ... ဆန်ကွဲမှ မဟုတ်တာ လုပ်တာကမှား (မြစ်ကောက်)
လိုချင်တာကမိဖုရား အိပ်နေတာကအထင်းသား( ရင်ခတ်နွယ်)
မှားပါလေရော အာဂလူရယ် (မြစ်ကောက်)
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 12:55 AM 1 comment: